कमालका छन् नेपालका कृषि योजनाकार ! – Newsagro
April 14, 2014 August 23, 2017 NewsAgro0Comments ‘एक घर एक रोजगार’, कमालका छन् नेपालका कृषि योजनाकार !, कृषि, प्रयागदत्त तिवारी
यो समाचार 698 पटक पढिएको
स्विट्जरल्यान्डमा पढे, नेपालका कुनाकन्दारामा पनि पुगे । उनी सरकारी अफिसमा काम गर्न जाँदा त्यो समाचार बनेर रेडियो नेपालमा बज्यो । पोखरामा तरकारी फलाए, फलेको तरकारी बेच्न सिकाए । उनी थिए प्रयागदत्त तिवारी, जो विसं १९८९ सालको असारमा तनहुँको च्यानडाँडा भन्ने ठाउँमा जन्मिएका हुन् । च्यानडाँडादेखि स्विट्जरल्यान्डसम्म उनको दौडाहा समेटिएको छ पुस्तकमा । अनि, जिरीदेखि सुरू भएको उनको जागिरे जीवनको धेरै समय भने विदेशी भूमिमा बित्यो, कृषिका योजनाहरु बुन्दै । उनका यी भोगाइ पढ्दै जाँदा भित्र प्रश्न उठेर आउँछ, होइन यत्तिका होनाहार मान्छे हुँदा पनि नेपालले उनको ज्ञानको उपयोग गर्न किन सकेन ? पुस्तकभित्र रहेका केही रोचक पक्ष यस्ता छन् :
तिवारीकै नाममा खरबुजाको नामकरण
भारतको माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा मनकारी काम
नेपालमा पनि हुनसम्म गरेका छन्
अलपत्र एक घर एक रोजगार
← निकै लाभदायक छ, अष्ट्रिचको मासु
केरा खेतीबाटै लाखौंको आम्दानी →
यो समाचार 7106 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 6957 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 7514 पटक पढिएकोWhy Farmers Cry ? – Suman Pant – Ram Bahadur Gautam has invested $1.4 million(14 crore
यो समाचार 7971 पटक पढिएकोकाठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि किसानले खेतबारी जोत्न प्रयोग गर्ने ट्रयाक्टरमा भ्याट छुटको सुविधा हटाएपछि